Dembiga oo aan rajo beel ahayn? , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Waa wax lala yaabo in Martin Luther warqad u qoro saaxiibkiis Philip Melanchthon isagoo ku waaniyey: Dembiil oo dembiguna ha xoog badnaado, laakiin ka awood badan dembiga waa aaminkaaga Masiixa oo ku farax Masiixa inuu yahay denbi, wuu ka adkaaday dhimashada iyo adduunka.
Jaleecada hore, dalabka wuxuu umuuqdaa mid cajiib ah. Si loo fahmo digniinta Luther, waxaan ubaahanahay inaan si dhow u eegno macnaha guud. Luther uguma yeerayo dambiga ficil la jecel yahay. Taa bedelkeeda, wuxuu u jeedinayay xaqiiqda ah inaan weli dembaabno, laakiin isagu ma uusan dooneynin inaan niyad jabno maxaa yeelay waxaan ka cabsaneynaa in Ilaah naga fogeeyo nimcadiisa. Wax kastoo aan sameynay markii aan Masiixa ku jirnay, nimcadu had iyo jeer way ka awood badan tahay dembiga. Xitaa haddii aan dembaabnay 10.000 Malachi maalintii, dembiyadeenna waa kuwa aan awood lahayn marka loo eego naxariista weyn ee Eebbe.
Tan micnaheedu maahan inaysan micno lahayn in aan si xaq ah u nool nahay. Bawlos markiiba wuxuu garanayay waxa ku dhici doona isaga oo ka jawaabaya su'aalaha: "Maxaan nidhaahnaa hadda? Miyaynu ku sii soconnaa dembiga si nimcadu u sii xoog badato? ugu jawaabay sidan: Taasi waa fogaan! Sidee ayaynu rabnaa inaan ugu noolaano dambiga kadib markaan dhinto? » (Rooma 6,1-2).
Raacitaanka Ciise Masiix, waxaa naloogu yeeray inaan raacno tusaalaha Masiixa, inaan jeclaano Ilaah iyo deriskeenna. Ilaa iyo inta aan dunidan ku nool nahay, waa inaan la noolaano dhibaatada aan ku dembaabno. Xaaladda jirta, waa inaanan u oggolaanayn cabsi inay inaga dulqaado si aan u lumiyo kalsoonida aaminka Eebbe. Taa bedelkeed, waxaan qirannaa dembiyadayada ilaahay waxaanan aaminsanahay xitaa nimcadiisa. Karl Barth mar ayaa sidan u dhigay: Qorniinku wuxuu inaga mamnuucayaa inaan dembiga si culus u qaadano ama xitaa si daran ugu fadhido nimcada.
Masiixi walba wuxuu ogsoonyahay in dembigu xun yahay. Si kastaba ha noqotee, rumaystayaal badan ayaa u baahan in la xasuusiyo sida wax looga qabto markay dembaabaan. Waa maxay jawaabtu? Kuu qiro dembiyadaada adigoon xakamayn ku haynin Ilaah oo si dhab ah u cafi cafis. Ku soo gal carshiga nimcada adoo kalsooni ku qabo oo kalsooni ku qabo inuu ku siin doono nimcadiisa iyo xitaa in ka badan inta kugu filan.